Xukuumadda Pyongyang oo gantaal riddo dheer mar kale tijaabisay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xukuumadda Pyongyang oo gantaal riddo dheer mar kale tijaabisay
Xukuumadda Pyongyang oo gantaal riddo dheer mar kale tijaabisay
Pyongyang(SONNA) Xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horeesay muddo laba bilood ah kadib waxaay tijaabisay gantaal ballistic ah.
Sida ay sheegayaan Saraakiisha milateriga ee Kuuriyada koonfured gantaalkani ayaa dul maray bariga dalkaasi, kadib markii laga soo ganay meel u dhaw magaalada Pyongyang.
Xeer dheeriyaad ka faalooda arrimaha dalkaasi ayaa sheegay in Pyongyang ay horumarineyso gantaaladeeda, iyadoo uga gol leh inay ku bartilmaameedsato goobaha fog fog sida dalka Mareykanka,kaasi oo uu khilaaf siyaasadeed kala dhexeeyo.
Wasaarada Gaashaandhigga Mareyakank ee Pentagon ayaa sheegtay in tani ay u muuqato inay tahay gantaalada isaga kala goosha qaaradaha, waxaana la sheegay in gantaalkan ay riday Pyongyang uu socday masaafo dhan Kun kilomitir, kahor inta aanu kusoo dhicin badda Japan.
Pentagon-ka waxaa kale oo ay intaa ku dareen in gantaalkani uusan aheyn mid khatar ku ah xullafada Mareykanka iyo waqooyiga Mareykanka toona.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay tijaabada gantalkan ayaa sheegay in tani ay tahay xaalad la xakameyn karo.
Mareykanka iyo wadamo badan ayaa ka walaacsan tijaabooyinka Gantaalada ee Waqooyiga Kuuriya,iyadoo xukuumadda Waqooyiga Kuuriyana ay ka dhaga adeegeyso baaqa Qaramada Midoobey ee ahaa in ay joojiso Gantaaladaasi.
Previous article Muwaadin bixi canshuurta
Next articleHowgalo ka dhan ah Argagixisada Al shabaab oo ka Bilowday Gobolka Hiiraan
Madaxwene Xasan Sheekh Maxamuud oo qaabilay safiirka dowladda Qatar u jooga Soomaaliya.
SAWIRO:Madaxweynaha JFS oo maanta la kulmay safiirka dowlada Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya.
Madaxwene Xasan Sheekh Maxamuud oo qaabilay safiirka dowladda Qatar u jooga...
SAWIRO:Madaxweynaha JFS oo maanta la kulmay safiirka dowlada Sacuudiga u fadhiya...